4. Ubudlelwane Phakathi Kwaleso Naleso Sezigaba Ezintathu Zomsebenzi KaNkulunkulu | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Umsebenzi owenziwe ngezinsuku zokugcina awusoze wathathela umsebenzi weNkathi Yomthetho noma iNkathi Yomusa indawo. Nokho, izigaba zontathu ziyahlangana zibe yisigaba esisodwa futhi zonke ziwumsebenzi owenziwe nguNkulunkulu. Ngokusobala, ukwenziwa kwalo msebenzi kuhlukaniswe izigaba ezintathu. Umsebenzi owenziwa ezinsukwini zokugcina uphothula zonke izinto; lezo ezenziwa eNkathini Yomthetho zingezokuqala; kanti lezo ezenziwa eNkathini Yomusa zingezokuhlenga. Ngokuqondene nemibono yomsebenzi weminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, akekho ongathola ukwazi nokuqonda. Imibono enjalo iqhubekile nokuba yimfihlakalo. Ezinsukwini zokugcina, kwenziwa umsebenzi wezwi kuphela ukungenisa iNkathi Yombuso kodwa awumele zonke izinkathi. Izinsuku zokugcina azikho ngaphezu kwezinsuku zokugcina futhi azikho ngaphezu kweNkathi Yombuso engameleli iNkathi Yomusa noma iNkathi Yomthetho. Izinsuku zokugcina ziyisikhathi lapho wonke umsebenzi weminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha wambulwe khona kinina. Lokhu ukwambulwa kwemfihlakalo. …
Isigaba sokugcina somsebenzi asimile sodwa, kodwa siyingxenye yendikimba eyakhiwe izigaba ezimbili zangaphambilini ndawonye, okusho ukuthi ngeke kwenzeke neze ukuthi uqede umsebenzi wonke wokusindisa ngokwenza esinye sezigaba ezintathu zomsebenzi sodwa kuphela. Nakuba isigaba sokugcina somsebenzi siyakwazi ukusindisa umuntu ngokuphelele, lokhu akusho ukuthi kudingeka kwenziwe lesi sigaba sisodwa kuphela, nokuthi lezi zigaba zomsebenzi ezimbili zangaphambilini azidingeki ukusindisa umuntu ethonyeni likaSathane. Asikho isigaba ezigabeni ezintathu esingaphakanyiswa njengombono okuyiwona kuphela ofanele waziwe isintu sonke, ngoba umsebenzi wensindiso sewu wonke uyizigaba ezintathu zomsebenzi, hhayi isigaba esisodwa phakathi kwazo. Inqobo uma umsebenzi wensindiso ungakafezeki, ukuphatha kukaNkulunkulu ngeke kukwazi ukufika ekupheleni okuphelele. Ubuyena, isimo, kanye nokuhlakanipha kukaNkulunkulu buvezwa emsebenzini wensindiso sewu wonke, abuvezwanga kumuntu ekuqaleni kakhulu, kodwa kuvezwe kancane kancane emsebenzi wensindiso. Isigaba ngasinye somsebenzi wensindiso siveza ingxenye yesimo sikaNkulunkulu, kanye nengxenye yobuyena; Akuzona zonke izigaba zomsebenzi ezingaveza ngqo futhi ezingaveza ngokuphelele Ubuyena sebubonke bukaNkulunkulu. Ngakho, umsebenzi wensindiso ungaphethwa uma izigaba ezintathu zomsebenzi seziphothuliwe, ngakho ulwazi lo muntu ngakho konke ngoNkulunkulu, lungehlukaniswe nezigaba ezintathu zomsebenzi kaNkulunkulu. Lokho umuntu akuzuzayo esigabeni somsebenzi esisodwa kumane kuyisimo sikaNkulunkulu esivelayo engxenyeni eyodwa yomsebenzi Wakhe. Akukwazi ukumela isimo nobuyena okuvela ezigabeni ezingaphambili noma ezingemuva. Lokhu yingoba umsebenzi wokusindisa umuntu ngeke uqedwe khona manjalo esikhathini esisodwa, noma endaweni eyodwa, kodwa kancane kancane uya ujula ngangezinga lokuthuthuka komuntu ezikhathini nasezindaweni ezihlukene. Kuwumsebenzi owenziwa ngezigaba, futhi awupheli ngesigaba esisodwa. Ngakho, ukuhlakanipha kukaNkulunkulu sekukonke kucaciswa ezigabeni ezintathu kunasesigabeni esisodwa. Ubuyena bubonke nobuhlakani Bakhe bubonke bendlalwe kulezi zigaba ezintathu, futhi isigaba ngasinye siphethe ubuyena Bakhe, futhi siwumbhalo wokuhlakanipha komsebenzi Wakhe. Umuntu kufanele azi isimo sisonke sikaNkulunkulu esivezwa kule zigaba ezintathu. Konke lokhu ngobuyena bukaNkulunkulu kubaluleke kakhulu impela esintwini sonke, futhi uma abantu bengenalo lolu lwazi uma bekhonza uNkulunkulu, abahlukile kulabo abakhonza uBuddha. Umsebenzi kaNkulunkulu phakathi kwabantu awufihliwe kumuntu, futhi kufanele waziwe yibo bonke labo abakhonza uNkulunkulu. Njengoba uNkulunkulu esezenzile lezi zigaba ezintathu zomsebenzi wensindiso phakathi kwabantu, umuntu kufanele azi ukuvezwa kwalokho anakho nayikho ngezikhathi zalezi zigaba ezintathu zomsebenzi. Ilokhu okufanele kwenziwe umuntu. Akufihlayo uNkulunkulu kumuntu yilokho umuntu angeke akwazi ukukwenza, nalokho umuntu angafanele ukukwazi, kanti lokho uNkulunkulu akukhombisa umuntu yilokho umuntu ekufanele akwazi, nalokho umuntu ekufanele abenakho. Isigaba ngasinye sezigaba ezintathu zomsebenzi senziwa phezu kwesisekelo sesigaba esingaphambilini; asenziwa ngokuzimela, sehlukanisiwe emsebenzini wensindiso. Nakuba kunomehluko omkhulu enkathini nenhlobo yomsebenzi owenziwayo, emnyombeni wawo, kuseyinsindiso yesintu, futhi isigaba ngasinye somsebenzi wensindiso sijulile kakhulu kunesigcinile.
Umsebenzi walo lonke uhlelo lokuphatha lukaNkulunkulu, wenziwa nguNkulunkulu Uqobo Lwakhe. Isigaba sokuqala—ukudalwa komhlaba—kwenziwa mathupha nguNkulunkulu Uqobo Lwakhe, futhi ukuba kwakungenziwanga, kwakungekho omunye owayengakwazi ukudala isintu; isigaba sesibili kwaba ukuhlengwa kwesintu sonke, nakho kwenziwa mathupha nguNkulunkulu Uqobo Lwakhe; isigaba sesithathu sisobala: Kunesidingo esikhulu nakakhulu sokuba isiphetho sawo wonke umsebenzi kaNkulunkulu senziwe nguNkulunkulu Uqobo Lwakhe mathupha. Umsebenzi wokuhlenga, wokunqoba, wokuzuza kanye nokuphelelisa isintu sisonkana wonke wenziwa mathupha nguNkulunkulu Uqobo Lwakhe. Uma ubengawenzanga lo msebenzi mathupha, ubunjalo Bakhe bebungeke bumelwe ngumuntu, noma umsebenzi wakhe wenziwe ngumuntu. Ukuze ehlule uSathane, ukuze azuze isintu, futhi ukuze anike umuntu impilo ejwayelekile emhlabeni, uhola umuntu mathupha futhi asebenze phakathi kwabantu mathupha; ngenxa yohlelo lwakhe lokuphatha lulonke, futhi ngenxa yomsebenzi wakhe wonke, kufanele awenze yena mathupha lomsebenzi.
Okwedlule: 3. Inhloso Nokubaluleka Kwaleso Naleso Sezigaba Ezintathu Zomsebenzi KaNkulunkulu
Okulandelayo: 5. Kungani Kuthiwa Ukwazi Izigaba Ezintathu Zomsebenzi KaNkulunkulu Kuyindlela Eya Ekwazini UNkulunkulu?